SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Finnish French German Greek Hiligaynon Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Malagasy Myanmar Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swedish Tagalog Thai Tsonga Turkish Ukrainian Vietnamese Zulu
ZVINOITA sokuti njodzi dzinongoitika dzoga dziri kugara dzichingotaurwa munhau. Vanhu vakawanda vari kuwirwa nenjodzi dzakasiya-siyana zvisati zvamboitika. Sangano rinonzi The Centre for Research on the Epidemiology of Disasters rokuBelgium rakataura kuti muna 2010 chete kwakaitika njodzi 373 dzikauraya vanhu vanenge 296 000.
Njodzi dzinongoitika dzoga dzakawedzerawo chaizvo mumakumi emakore apfuura. Somuenzaniso, kubva muna 1975 kusvika muna 1999, paiitika njodzi dzisingasviki 300 pagore roga roga. Asi kubva muna 2000 kusvika muna 2010, gore roga roga paiitika njodzi dzinoda kusvika 400. Pamwe uri mumwe wevanhu vanonetseka kuti, ‘Sei njodzi dzanyanya kuwanda iye zvino?’
Kunyange zvazvo vanhu vachiwanzoti njodzi idzodzo “mabasa aMwari,” pfungwa iyoyo yakarasika. Mwari haasi iye anokonzera matambudziko anowira vanhu vakawanda mazuva ano. Kunyange zvakadaro, Bhaibheri rakagara rataura kuti paizova nenjodzi idzodzo munguva ino yatiri kurarama. Somuenzaniso, pana Mateu 24:7, 8 pane mashoko aJesu anoti: “Kuchava nokushomeka kwezvokudya nokudengenyeka kwenyika munzvimbo nenzvimbo. Zvinhu zvose izvi zvichava kutanga kwemarwadzo enhamo.” Nei Jesu akafanotaura zvinhu izvozvo uye zvinorevei kwatiri?
Mwanakomana waMwari Jesu akanga achipindura mubvunzo waakanga abvunzwa nevadzidzi vake wokuti: ‘Chii chichava chiratidzo chokuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho?’ (Mateu 24:3) Akataura zvinhu zvakawanda zvaizoitika zvinosanganisira matambudziko ataurwa pamusoro apa. Akabva azotaura mashoko aya anokosha: “Pamunoona zvinhu izvi zvichiitika, zivai kuti umambo hwaMwari hwava pedyo.” (Ruka 21:31) Saka, njodzi dzinongoitika dzoga idzodzo dzine zvadzinoreva zvinokosha kwatiri. Dzinotiratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvava kuda kuitika pamberi pedu apa.
Zvimwe Zvinoita Kuti Njodzi Dziitike
Kunyange zvakadaro, vanhu vakawanda vanobvunza kuti: ‘Kana Mwari asiriye anokonzera njodzi idzi, saka ndiani anodzikonzera kana kuti chii chinodzikonzera?’ Tinogona kungowana mhinduro yacho kana tikaziva chokwadi chakakosha chinotaurwa muBhaibheri chokuti: “Nyika yose iri musimba reakaipa.” (1 Johani 5:19) Ndima yeBhaibheri iyi inoratidza kuti Mwari haasi iye anokonzera matambudziko ari munyika asi kakawanda kacho anobva kumuvengi wake “akaipa” uyo anonziwo “Dhiyabhorosi” muBhaibheri.​—Zvakazarurwa 12:9, 12.
Neudyire hwake, muvengi uyu waMwari anoona vanhu semidziyo inogona kungoshandiswa yozoraswa. Nemhaka yokuti nyika yose iri musimba rake, anoita kuti vanhu vavewo nemafungiro akaita seake. Bhaibheri rakagara ratozvitaura parakati “mumazuva okupedzisira . . . vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvitutumadza, vanozvikudza.” (2 Timoti 3:1, 2) Saka hazvishamisi kuti Dhiyabhorosi akaita kuti vanhu munyika yose vave nemaitiro akadai nemamwewo akaipa. Anokurudzira kuti vanhu vangozvifunga ivo uye kuti vaparadze zviwanikwa, izvo zvinozoita kuti varumwe nechokuchera.
Nyika yanhasi ine makaro inokonzera sei njodzi? Ongororo yakaitwa neSangano Romubatanidzwa Wenyika Dzepasi Pose nezvenjodzi dziri kuitika pasi pose yakabudisa kuti: “Vanhu vanowanzogara vakawanda munzvimbo dzine ngozi dzakadai sedzinoitika mafashamo. Uyewo kuparadzwa kwemasango nematoro kuri kuita kuti pasi redu ritadze kuzvidzivirira panjodzi. Pari kunyanyawo kutyirwa kuti mamiriro okunze pasi rose achachinja uye mvura ichawanda mumakungwa nemhaka yokuwandisa kwemagasi akaita secarbon dioxide mumhepo . . . zvichikonzerwa nezvinoitwa nevanhu.” Kunyange zvazvo izvi “zvinoitwa nevanhu” zvichinzi zvinoita kuti upfumi hwenyika husimukire, chiripo ndechokuti zvinongoratidza udyire uye makaro ari munyika.
Iye zvino nyanzvi dzakawanda dzava kubvuma kuti zvinoitwa nevanhu vasingakendengi zviri kuita kuti njodzi dzikuvadze zvakanyanya. Vanhu vari kutotsigira nzira iri kushandiswa naDhiyabhorosi pakuita kuti njodzi dzinyanye kuitika.
Sezvataurwa, njodzi dzakawanda dziri kuitika dziri kukonzerwa nevanhu vanoita zvinhu vasina hanya kuti zvichaguma nei. Dzimwe njodzi dzingadai dzisina kuparadza zvakanyanya kudai dzakaitika kunzvimbo dzisina vanhu vakawanda. Munyika dzakawanda, kuparadza kwenjodzi kwakawedzerwa nemabasa evanhu vakaipa kana kuti nokuti vanhu vakawanda vanomanikidzwa kugara munzvimbo dzine ngozi nemhaka yourombo uye kutadza kugarisana. Vamwewo vanowirwa nenjodzi zvisingakonzerwi nemumwe munhu, asi ‘nokuti munhu wose anowirwa nenguva nezviitiko zvisingafanoonekwi.’​—Muparidzi 9:11.
Pasinei nokuti njodzi dzinongoitika dzoga dzakonzerwa nei, ungaita sei kana wawirwa neimwe yadzo? Iye zvino tichakurukura nezvezvingaitwa kuderedza matambudziko anovapo panoitika njodzi.
Matanho api anobatsira aungatora pakugadzirira? Ukama naMwari hungakubatsira sei?